Aqoonta iyo Farsmada Muuqaal Duubista | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Qandhada Ma Cudurbaa Mise Calaamad?
Miski Cabdinuur Salal, February 4, 2020
Ma Ahan Soomaaliya In Lagu Tilmaamo Qarankii Guul Dareystay *The failed State*
Cabdijabaar Sh. Axmed, October 23, 2016
Afrikaan.so, March 9, 2016
Filashadii Shacni Foorar Baa u Dambeeyay!
Qorshaha Ganacsiga “Business Plan”
Cabdijabaar Sh. Axmed, November 12, 2016
Sahal Issack, My Autobiography |Tukesomalism.com
Kayse Abti-doon, October 6, 2017
Aqoonta iyo Farsmada Muuqaal Duubista
Maxamed Cabdirisaaq Diriye — February 8, 2020
Farriinta ay bixiyaan muuqaalada iyo sawiradu waa ay ka awood iyo saamayn badan tahay farriinta cod ama qoraal ahaan lagu gudbiyo. Muuqaalku wuu geli ogyahay maanka qofka, wuuna ka maan-ku-har dheer yahay farriimaha kale ee loo gudbiyo qaababka kale.
Hal sawir ayaa gudbin kara farriin qoritaankeedu buuxinayo waraaqo badan. Haddii aad qof isbarataan, waxaad maskax ahaan isku guntaysaa muuqaalkiisa iyo magaciisa, haddii aad muddo ismoogaataan, waxaad isku gunudday waa ay kala furanayaan, waxaa dhumaya magacii laakiin maskaxdaadu waxay la haraysaa muuqaalkii. Intee qof ayaad xasuusataa wajigooda oo aad xoortay magacoodii?! In badan ayaad maqashay amase tiriba ‘wajigaagu wuu igu yaallaa’.
Waxaa awood badan maskax ku harka sawirka. Farriinta qoraal ahaan loo gudbiyo iyo farriinta muuqaal ahaan loo gudbiyo, waxaa xiiso iyo soo jiidasho badan farriinta muuqaalka. Inta badanna waxaa muhiimsan farriinta iyo aqoonta qoraal ahaan loo dhaxlo. Muuqaal duubistu waa fan gaar ah, si gaar ah loo darso laguna takhasuso. Fanka muuqaal duubista isaga ayaa usii kala baxa qaybo badan balse si guud ayaan ugu hadlayaa.
Waxaa muuqaal loo dubaa dhowr ujeeddo, in madadaalo loola jeedo, in wacyi-gelin loola jeedo, in lagu xallinayo dhibaato jirta oo aysan bulshadu ogayn, in aqoon iyo waayo-aragnimo lagu soo gudbinayo, in suuq-kayn iyo xayeysiin loola jeedo, in qayb dunida ka mid ahi ay ku hormariso dhaqankeeda, afkeeda, aragtiyadeeda iyo diinteeda iyo in lagu gudbiyo farriin muujinaysa kala sarrayn ummaded.
Muuqaal duubistu waa farsamo aad u dhib iyo qaxar badan, ka fiirsasho badan u baahan, dedaalka aad u hurtay iyo miro-dhalkuna uu san marar badan isku dhigmin. Haddii aadan marka hore samayn ka fiirsasho iyo taxadar badan. Tusaale maantay oo dhan haddii aad wax duubaysay, oo markaad shaqadii dhamaysay aad ogaatay in muqaladii aad maantay oo dhan duubaysay aysan cod lahayn ama codki halleysan yahay.
Aqoonta wax duubista mararka qaar waxaa ka qaayo sarreysa waayo-aragnimada sababta oo ah wax duubistu waa farsamo gacan ku hayn ah. Waxaase habboon in labaduba ay wada socdaan. Duubaha muqaalada iyo dejiyaha habka muuqaal duubista waa dad garaadka shaqeysiiya si indheer-garadnimo ah ugu fakara waxa bulshada ay xiisayn karto.
Filimaanta iyo muuqaalada aad xiisaysid waa aragtiyo ka soo maaxday maan qof kula mid ah leeyahay, oo uu qaabab badan loo dhigay. Waa aragti loo badalay muuqaalo ceeriin ah, ka dibna loo badalay mid u diyaarsan daawasho.
Markaad muuqaal duubaysid, waxaad niyadda ku haynaysaa inuu noqon doono mid xiiso geliya dadka. Intee muuqaal ayaa inta waqti iyo dedaal lagashay noqday fuunto ama wax lagu khasaaray?
Waxaad niyadda ku haynaysaa inuu san muuqaalkaagu noqon mid lagu caajiso. Tusaale waxaad duubaysaa muuqaal labo daqiiqo ah oo aad qof wareysanayso. Waa waqti yar, balse ka fikir sidaad labadaas daqiiqo u haysan lahayd dareenka iyo indhaha daawadaha.
Haddii aad Kaamerada hordhigtid qofka aad wareysanaysid oo daqiiqadda ugu horeysa oo dhan hal qaab oo aan isbadalayn ka dhigtid, waxay ubadan tahay in daawaduhu uu ku caajiso wajigaas halka daqiiqo soo fiirinaya. Laakiin halkaas daqiiqo haddii aad muuqaladu isbadbadalaan iyadoo hadalkii la wareystaha uu socda xiiso gooniya ayeey samaynaysaa.
Waxaad duubanaysaa muuqaalo badan, tusaale qofka oo soconaya ayaad muuqaal ka duubaysaa, marna Kaamerada oo dhinac ka haysa ayaad duubanaysaa, mar qofka oo shaqo haya haddii aad heli kartid. Intaas oo muuqaal ah markaad hadba mid tustid indhaha daawadaha, xiiso gooniya ayuu yeelanayaa muuqaalkaagu.
Marka laga hadlayo qaabka loo qabanayo muuqaalka waxay ku xiran tahay, waxaad rabtid inaad muujisid. Haddii aad rabtid inaad dareenka iyo shacuurta qof aad muujisid waxaad diiradda saareysaa wajiga qofka iyo indhaha qofka. Maaddaama cilmiga tijnoolajiyadda uu sii horumarayo, marba marka ka danbaysa, fanka duubista waxaa saamayn mug leh ku yeeshay tijnoolajiyadda.
Heer waxaa la marayaa in caqliyadda dadka lagu ciyaaro, waxyaabo si sahlan loo duubay ayaa dadka looga dhigaa wax wayn. Laga yaabaa filimada laayaabka iyo amakaagga leh in aaladda kumbuyuutarka lagu hagaajiyey. Si kastaba ha la isticmaalee, hammiga soosaarayaasha ayaa ah saamaynta iyo xiiso gelinta daawadayaashada.
Waxaa jira fan la xiriira duubista muuqalada ee layiraahdo Folley artists, waa dad gaara ah iyo goobo lagu sameeyey shaqarta filimada iyo muusigga.
Waxaan aad loogu isticmaalaa filimada cabsida leh. Tusaale, in Kaamerada laga maqlo shankarta kabaha jilaaga wey adagtahay balse kooxdaan ku takhasustay samaynta shanqarta ayaa samaynayaa iyagoo isticmaalaya ashyaa kala duwan.
Haddii ay rabaan inay abuuraan shanqarta biyo meel kore ka soo dhacaya, waxay diyaarinayaan weel godan, codwayneyayaal ayeey u dhaweynayaan ka dibna qof baa biyo ku shubaya weelkii la diyaariyey. Fankaan waa mid ballaaran oo dunida lagu kala horreeyo, Afrikaankuna waa looga horreeyaa oo waxaa hormuud u ah reer galbeedka.
Maddaama ay tijnoolajiyadda ku horreeyaan. Muuqaal duubistu waa farsamo ayaamahan baahiyaheedu soo badanayaan. Si kastaba ha ahaatee waxaan kula talinayaa qof walba oo qoraalkaan akhriya in uu wax uun ka barto.
Tags: Aqoonta iyo Farsmada Muuqaal Duubista
Next post Aragtida Siyaasadda iyo Dawladnimada
Previous post Ka Fiirso Go’aamada Shaqsiga Ah!
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Wuxuu wax ka qoraa cilmiga Bulshada, nabadda iyo amniga, siyaasadda, sooyaalka, arrimaha bulshada, xallinta khilaafaadka, dhaqanka, Afka iyo aqoonta guud ahaaneed. Wuxuu bartay cilmiga Bulshada, nabadda iyo amniga. Heerka koowaad wuxuu bartay cilmiga bulshada (Sociology), heerka labaad ee jaamacada (Master degree) wuxuu bartay Nabadda iyo Amniga ‘Peace and Security. Siddoo kale qoraaga ayaa soo bartay cilmiga sheybaarka. Qoraagu wuxuu bare sarre ka ahaa jaamacada Bariga Afrika.